आशु झार्दै राजीनामा दिएकी प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता कस्तो होला ?  Hamrosandesh.com
आशु झार्दै राजीनामा दिएकी प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता कस्तो होला ?
‘लण्डन, बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले शुक्रबार (२४ जेठ) सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री मेले जुन ७ मा कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिने यसअघि नै बताएकी थिइन् ।
मेको ठाउँमा जुलाईको अन्त्यसम्ममा बेलायतमा अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ र यस दौडमा ११ जना रहेका छन् । युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने (ब्रेक्जीट) का बारेमा संसदमा प्रस्ताव ल्याएपनि त्यो पारित हुन नसकेपछि उनले राजीनामा दिएकी हुन् । ब्रेक्जीटका बारेको अन्यौल कायमै रहने देखिएका कारण पनि बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले करिब दुई हप्ता अगाडि नै आफू सरकारबाट हट्ने घोषणा गरेकी थिइन् । ब्रेक्जीटका बारेमा आफ्नै दलका सांसदहरूलाई पनि विश्वासमा लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री मेले दलको नेतृत्वका साथै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
ब्रेक्जीट सम्झौतामा सफलता पाउन नसकेकामा आफूलाई धेरै दुःख लागेको र यो विषयले सधैँ पश्ताचाप भएको उनले बताइन । प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुलाई बेलायती सत्ताधारी दलमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धाको शुरूवातका रूपमा हेरिएको थियो । अर्को नेतृत्व नआउँदासम्म प्रधानमन्त्री मेले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । आजैबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया शुरू हुनेछ । नेतृत्वको लागि हुने प्रतिस्पर्धा आगामी केही हप्ता लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।’
यो समाचार शुक्रवार (२४ जेठ) प्रकाशित भएको हो । त्यसको भोलीपल्ट शनिवार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली करिव तीनदर्जनको संख्या लिएर ९ दिन लामो युरोप भ्रमणमा निस्किए त्यसमध्येको अरुभन्दा लामो भ्रमण यही देश बेलयातको थियो ।
यो भ्रमणका बारे जेठ १९ मा परराष्ट्र मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री जेठ २५ गते स्विटजरल्याण्डको जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको साधारण सभामा सहभागी हुने, त्यसपछि जेठ २७ गते बेलायतमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा संबोधन गर्ने, २८ गते त्यहाकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मे संग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने र जेठ २९ गते त्यहाँबाट फ्रान्स जाने, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ उच्च स्तरीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको वताएका थिए ।